Aqriso: Afarta qodob ee looga hadlayo shirka Rooble iyo madax goboleedyada - Caasimada Online
Home Warar Aqriso: Afarta qodob ee looga hadlayo shirka Rooble iyo madax goboleedyada
Aqriso: Afarta qodob ee looga hadlayo shirka Rooble iyo madax goboleedyada
Muqdisho (Caasimada Online) – Shirka Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa si rasmi ah u furmaya maalinta berri ah, kaasi oo ka dhici doona Afisyoone, sida lagu shaaciyey qoraal kasoo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta.
Shirka oo ay ka qeyb-gali doonaan ra’iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxaa looga hadli doona arrimaha doorashooyinka.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, madaxda ayaa si gaar ah shirkooda berri ku lafo-guri doona Afar qoddob oo muhiim ah, kuwaasi oo kala ah;
Kulanka berri oo uu shir guddoomin doono Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa waxa uu qorshuhu ahaa in uu qabsoomo shalay, waxaana dib u dhaca sababay safarka ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ugu maqna dalka Masar iyo madax goboleedyada oo aan soo wada gaarin caasimada dalka.
Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed, Axmed Qoor iyo Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, waxaana la filayaa in madaxda kale ee weli dhiman ay caasimada soo gaaran ka hor maalinta Sabtida.